Epic Mitambo maringe Apple. Dare reAustralia rinogamuchira masimba | Linux Vakapindwa muropa
2021 inotaridzika segore risiri-rakanaka-rehunyanzvis. Nezuro lakataura here yematare edzimhosva eUS muchuchisi kupokana neGoogle uye nhasi tinofanirwa kutaura nezve chitsva muhondo yepamutemo yeEpic Games inopesana neApple.
Iyo inogona kuve imwe yeayo bhodhi yehondo mitambo chete kuti panzvimbo yemadhiza uye zviratidzo zvinowedzerwa nezvinyorwa nemagweta mumatunhu ese epasi.
1 Epic Mitambo vs. Apple Nyaya yakatanga sei
2 Mhinganidzo yakashongedzwa nekukunda
Epic Mitambo vs. Apple Nyaya yakatanga sei
Izvo zvese zvakatanga gore rapfuura apo kudzivirira 30% komisheni inodiwa neGoogle neApple Epic yakafunga kuisa sarudzo yekubhadhara mukati meFornite izvo zvakadzivirira iyo iri muzvitoro zveapp.
Fornite, yakatanga kuburitswa muna2017, inosanganisira akasiyana emhando dzemitambo modes dzinogovana imwecheteyo injini injini uye makanika. Kunyangwe iri yekutanga yemahara, inosanganisira zvimwe zvakabhadharwa maficha.
Apple uye mhinduro yaGoogle kuchisarudzo cheEpic yaive yekubvisa Fortnite kubva kumisika yavo.s, ichiti kambani iyi yatyora zvibvumirano zvekufungidzira nekutora nzvimbo muzvitoro zvemaapp.
Epic zvakare vakarwa nekumhan'ara mhosva kuApple neGoogle muUnited States, kupomera madhiragi ehunyanzvi ekuita mukurwisa-kukwikwidza uye kuita zvehukomba nekuda kwavo makumi matatu% masisitimu emitero.
Mumatare edzimhosva, kambani yakati:
Apple yave izvo zvayakashoropodza: ​​iyo hofori iyo inotsvaga kudzora misika, ichivharira makwikwi uye inokanganisa hunyanzvi. Apple yakakura, ine simba, yakadzika midzi, uye inotyisa kupfuura monopolists ezvekare. "Nemari yemari inosvika madhora zviuru zviviri zvemadhora, kukura kwaApple uye kusvika kwazviri kunopfuura kwechero tech monopolist munhoroondo."
Inotevera Epic Gameakamhan'arira zvakafanana kumatare akasiyana siyana kusanganisira Australia, EU neUK - zvichisimudza zvirevo zvakafanana.
Mhinganidzo yakashongedzwa nekukunda
Mhosva yekuUK yakadzingwa, asi kwete nekuti dare rakafunga kuti kwaisave nehunhu hwekuzvitonga. Sekureva kweDare, kunyangwe iyo subsidiary yeUK ichipa kutsvagisa nekusimudzira uye mamwe mabasa ehunyanzvi kune mamwe mapoka mukati meApple, izvo hazvireve kutsigira tekinoroji kana nyaya dzine chekuita nehurongwa. Mune mamwe mazwi, mudunhu raHumambo hwake hazvifungidzwe kuti ndeapi maficha anopinda kana anogona kuramba ari muchitoro chekushandisa.
Nekudaro, zvaive zvisiri zvese zvakaipa kune Epic se mutongi akafunga kuti dai zvisiri izvo, nyaya yacho ingadai yakagadziriswa mumatare eBritish.
Munyaya yeAustralia mutongi akange arasa nyaya iyi zvichibva nehunyanzvi hwepamutemo inozivikanwa se "yakasarudzika masimba". Zvikamu zvekutonga zvakasarudzika zvinodzivirira kumwe kumhan'ara kuti kuenderere mberi mudare reAustralia kana nyaya imwe chete iyi yaiyedzwa kune imwe nyika.
Mukupindura chikumbiro chekukwirira chaEpic, vatongi vatatu veFederal Court vakafunga kuti mutongi wekutanga aive akarasika pakupa mhaka, nekuti Idzi inyaya dzakakosha dzekufarira veruzhinji maererano nemufambiro unoitwa mune yepasi peAustralia uye inokanganisa kambani yeAustralia iyo isiri pachayo chikamu chemutemo wekutonga wega. Uye zvakare, ivo vakataura kuti ruzhinji rwevanhu rwunotora chinzvimbo chekutanga kupfuura zviga zvekutonga.
Vatongi vakafunga izvozvo kudzikisira Epic Mitambo kumhan'arira izvi zvichiitika muUnited States kwaizotorera kambani mukana wepamutemo wekuferefeta uyo ungamuka mukumhan'arira mutemo weAustralia.
Kune chikamu chayo, Apple haina kugara isina basa.
Kambani yeapuro yakamhan'arira Valve ichikumbira ruzivo nezve yekutengesa kwegore negore, mari, uye mitengo yeSteam chitoro maapplication. Kwete kuti Valve chikamu chemusika. Apple inoti inokumbira iyi ruzivo nekuti inoti inoda kuti iverenge saizi yemusika nekutsigira dziviriro yayo.
Valve yakabvuma kuendesa zvinyorwa zvine chekuita nemari yayo, kukwikwidzana neEpic, zvibvumirano zvekuparadzira Steam, uye zvimwe zvinhu zvebhizinesi rayo. Nekudaro, haina kupa ruzivo pamitengo, tichifunga kuti yaive yakavanzika uye yakaoma kutora.
Kunyangwe iri nguva isati yakwana ndinosimbisa, Ini ndinofunga isu tinogona kutarisira kumberi kumagumo ezvitoro zvepaapp zvitoro netariro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Epic Mitambo maringe neApple. Dare reAustralia rinogamuchira masimba